Qalbi-dhagax: Beyle wali bar-madow ayaa ka muuqata | KEYDMEDIA ENGLISH
Qalbi-dhagax: Beyle wali bar-madow ayaa ka muuqata
Qalbi-dhagax, ayaa layaab ku tilmaamay isku daygii uu shalay Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta, ku doonayay in aan laga laaban go’aankii qaldanaa ee ONLF loogu daray liiska Agagixisada.
NAIROBI, Kenya - Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi-dhagax, oo Farmaajo iyo Xasan Kheyre u gacan galiyeen Itoobiya 2017-kii, ayaa la yaab ku tilmaamay in Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, uu shalay noqday kaliya halka Wasiir ee diiday in laga laabto go’aankii Xukuumaddii hore ONLF ugu aqoonsatay Urur Aragagixiso.
Qabl-dhagax, oo saxaafadda kula hadlay Nairobi, ayaa nasiib-xumo ku tilmaamay in Beyle, oo hore uga mid ahaa xubnihii 2017-kii go’aanka qaldan isku raacay, uu wali ku adkeysanayo go’aan-kiisii hore, isla-markaana uu miisaska siyaasadeed ee go’aannada lagu gaaro uu uga doodayo in ONLF ay argagaxiso tahay.
“Hore ayaan uga hadlay, Wasiir Beyle ayaa la sheegay inuu go’aanka shalay diiddanaa, hore wuxuu ugu jiray Wasiirradii go’aankii khaldanaa soo saaray 2017, inuu wali ku sii dhaganaado mowqifkiisii oo ONLF uu argagixiso u yaqaan, waa taariikh xumo isga u qorantay”, ayuu yiri Qalbi-dhagax.
Go’aanka uu wali ku taagan yahay Beyle, ayuu ku tilmaamay, danbi uu ka galayo dad Soomaaliyeed iyo in uusan garaneynin dhaqan Soomaaliyeed iyo halganka soo jireenka ah ee umaddu ku jirtay dhowrkii Qarni ee la soo dhaafay.
Wuxuu xusay in Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, uu wali saaran yahay calaamutu-su’aal, isla-markaana ay bar-madow ka muuqato, wuxuuna hoosta ka qariiqay in gabood-falkii uu qeybta ka ahaa aan la isaga hari doonin oo laga wada-xisaabtami doono.
Markii uu bannaanka u soo baxay warka sheegaya in shalay Bayle uu miiska u garaacay in aan laga laaban karin go’aankii Xukuumaddii hore, ayuu xalay soo duubay muuqaal gaaban oo uu ku sheegayo in uusan ONLF u aqoonsaneyn Argagixiso.
Hayeeshee, isla-muuqaalkaas, ayuu ku sheegay in waqtigaan aysan ku habbooneyn ka hadalka qaddiyaddas, taas oo loo fisirtay inuu diiddan yahay in xilligaan doorashada la soo faago qaladaadkii siyaasadeed ee ay galeen saaxiibadiis Farmaajo iyo Kheyre.
Allaha u naxariistee, Wasiirkii hore ee Dastuurka, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, ayaa ah shaqsiga kaliya ee fadhiyay kulankii ONLF loogu aqoonsaday argagixiso ee Qalbi-dhagax weydiistay cafis, xilli ay ku kulmeen Jabuuti bartamihii September 2018.